Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukutofa kwezitofu: Ngaba kulungile, kubi okanye akunamdla?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Ukulibaziseka okungapheliyo okanye ukunqongophala kwezitofu zokugonya ze-COVID-19 kwamanye amazwe kukhokelela kubakhenkethi ukuba batyelele nakwezinye iindawo.
Ukhenketho lwechiza liphakamisa imibuzo yokungalingani kwisitofu.
Ukhenketho lokugonya lonyusa ukwahlula phakathi kwezityebi kunye namalungelo amancinanana.
Abona bantu bazizityebi kumazwe ahlwempuzekileyo banakho ukufikelela kwizitofu zokugonya kuba benakho ukuhamba.
Ukhenketho lokugonya, apho iindawo zabakhenkethi zinika khona ugonyo lwe-COVID-19 eholideyini ukutsala iindwendwe, likrele elintlangothi-mbini njengoko, ngelixa linokunceda ukuqala kwakhona kohambo, likwaphakamisa umbuzo wokulingana kwezitofu njengoko kuya konyusa ukwahlula phakathi izityebi kunye namalungelo ambalwa.
Uphando lwabathengi lwe-Q2 2021 lufumanise ukuba yi-6% kuphela yabaphenduli behlabathi abangakhathazeki ngempembelelo ye-COVID-19. I-94% eseleyo 'yayigqithise', 'kancinci' okanye 'kakhulu' ichaphazelekayo. Ngenxa yokuxhalaba okuphezulu, ithuba lokugonywa sele lithathiwe ngabaninzi. Ukulibaziseka okungapheliyo okanye ukunqongophala kwezitofu zokugonya ze-COVID-19 kwamanye amazwe kukhokelela kubakhenkethi ukuba batyelele nakwezinye iindawo.
Abona bantu bazizityebi kumazwe ahlwempuzekileyo ngoku baya kuba nakho ukufikelela kwizitofu zokugonya kuqala njengoko benako ukuhambela. Oku kuphakamisa impikiswano yokuba amazwe akhuthaza ukhenketho lokugonya anganikela ngeedosi zokugonya ezigqithisileyo endaweni yokunika ukufikelela kubakhenkethi abazizityebi.
Ngokuqinisekileyo US I-Russia, iMaldives, ne-Indonesia zezinye zeendawo ezikhoyo ezibonelela ngogonyo kubakhenkethi. Ezinye iiarhente zokuhamba zithathe ithuba lokukhuthaza iipakethi zokhenketho lokugonya njengendlela yokunyusa ingeniso. Kwi Rhashiya, umzekelo, iiveki ezintathu ukhenketho lokugonya Iiphakheji ezinamaxabiso aphakathi kwe-US $ 1,500 ukuya kwi-US $ 2,500, ngaphandle kwexabiso letikiti lendiza, kubandakanya ugonyo. Nangona kunjalo, kwiindawo ezininzi kwihlabathi liphela zisasokola ngezixhobo zokugonya ezisezantsi, oku kuphakamisa umbuzo wokulingana kwisitofu.
Ngokwedatha yakutshanje, iDemocratic Republic of the Congo yenze ugonyo olungu-3.5 kubantu abali-1,000 25 nge-2021 Agasti 1,115. Xa kuthelekiswa, i-US ibisele i-1,000 ngeedosi zokugonya kubantu abayi-XNUMX XNUMX kwangalo mhla. Oku kugqamisa sele kukho umsantsa omkhulu phakathi kwamazwe ahlukeneyo, kwaye uninzi lushiye ngasemva.
Into elungileyo yokhenketho lokuthintela isifo kukuba inokudlala indima ekuqalelweni kohambo emva kokuba ubhubhane we-COVID-19 ebangele ukuba eli candelo liguqe ngamadolo. Ukuhamba kwamazwe aphesheya kuye kwehla nge -72.5% ngaphezulu konyaka (YoY) kunye nohambo lwasekhaya nge -50.8% YoY, ngokweedatha zamva nje. Oku kubonisa iziphumo ezibi kakhulu zesifo kwaye kutheni iindawo zokuya kwihlabathi liphela zilangazelela ukuqala kwakhona kohambo.
Iimbadada iRoyal Bahamian: Olunye uhlengahlengiso lobunewunewu ...
I-Fraport kaJuni 2021 Amanani eTrafikhi: Ukubuyiswa kwakhona kwi ...
ILufthansa ikhusela ngakumbi ukuthengiswa kwemali kwikomkhulu ...
Ukuhamba kweIndiya kunye nokhenketho zijamelene nengxaki yezoqoqosho engxamisekileyo
IKenya ijolise kuKhenketho lwase-Afrika ukunciphisa i-COVID-19 ...
Abaphathi bomoya baseRussia baqala kwakhona ngeenqwelo moya zaseTurkey